Jenezy 28 - Ny Baiboly
16Nahatsiaro tamin'ny torimasony Jakoba, ka nanao hoe: Eto amin'ity toerana ity tokoa Iaveh, fa izaho tsy nahalala izany. 17Dia raiki-tahotra izy, ka nanohy hoe: Endrey mahatahotra ity fitoerana ity! Eto tokoa ny tranon'Andriamanitra, eto no vavahadin'ny lanitra! 18Nifoha maraina koa izy, dia nalainy ilay vato nataony ondana, naoriny nataony tsangam-bato ka norotsahany diloilo ny tampony. 19Nataony hoe Betela no anaran'io fitoerana io. Loza anefa no anaran'ny tanàna tany aloha. 20Ary nanao voady Jakoba ka hoy izy: Raha momba ahy tokoa Andriamanitra ka miaro ahy amin'izao dia alehako izao, raha manome ahy hanin-ko-hanina sy lamba hitafiako; 21ka tafaverina soa aman-tsara any an-tranon'ikaky aho, dia Iaveh no ho Andriamanitro. 22Ho tranon'Andriamanitra ity vato naoriko ho tsangam-bato ity, ary haloako ho anao ny am-pahafolon'izay rehetra homenao ahy. >